I Cordierite Catalytic Substrate China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Cordierite Catalytic Substrate - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 22 ye-I Cordierite Catalytic Substrate)
I-Industrial Si3N4 Ceramic Substrate
I-Industrial Si3N4 Ceramic Substrate I-silicon nitride iyinhlangano ephezulu, ene-lubricity futhi igqoke ukumelana. Ngaphandle kwalokho, akwenzi lutho ngezinye izinhlobo eziphilayo ngaphandle kwe-hydrofluoric acid. It has ukumelana ukuqina ukuqina kanye nokushisa high oxidation ukumelana. Futhi ingamelana nokushisa...
I-alumina ceramic substrate Incazelo: I-substrates ye-ceramic catalytic ingashintsha izinto ezinobungozi ezifana ne-HC, i-CO, i-NOx engenazimo ezilimazayo i-H2O, i-CO2, i-N2, ezobuchwepheshe obuthandwa kakhulu futhi obuthembisayo emkhakheni wemoto ngemuva kwensimu yokuphatha. ukuhola ukucacisa ubuchwepheshe bokugqoka,...
Ifilimu encane ye-ceramic substrate Incazelo: I-film encane ye-ceramic substrate isetshenziselwa izinhlelo eziningi ze-elekthronikhi lapho kunezingqimba ezincane zokugcoba izinto ezibonakalayo ezidingekayo ukuze kuqhutshwe ukushisa ngaphandle kwezingxenye ze-elekthroniki ngenkathi ugesiza izigesi. Ngaphandle kwalokho,...
Gqoka ukumelana nokumelana ne-alumina ceramic seramik substrate
I-Alumina ceramic seramik substrate Sinikeza izinhlobo eziningi ze-alumina, i-zirconia ne-nitride aluminium seramik substrate ngokukhishwa kwe-tape nokucindezela okumile kusuka kumaminithi. ubukhulu obukhulu obukhulu ngobukhulu obuhlukile, kufaka phakathi ubukhulu obukhulu buka-0.2mm, 0.30 obukhulu, 0.38 obukhulu,...
I-YTZP yokufaka uphawu lwe-zro2 zirconia nge-substrate
I-Zirconia substrate ceramic Incazelo: Isikhungo sethu sisebenza ku-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa imikhiqizo yezinto eziphambili ze-ceramic, kuhlanganise ne-Alumina, i-Zirconia, i-Silicon carbide, nezinye izinto eziphambili. Ngezinqubo ezahlukene zokukhiqiza, sinikeza izingxenye ze-ceramic zensimbi, i-alumina...
Ukushona okuphakeme okuphezulu 99% i-alumina ceramic substrate
99% i-alumina ceramic substrate 99% i-alumina ceramic substrate inesakhiwo esingcono kunama-95% alumina noma ezinye izingxenye eziphansi ze-alumina ceramic. Izindlela zokukhiqiza eziyinhloko zengu-99% ye-alumina ceramic substrate zibandakanya ukukhishwa kwe-tape eyomile. Singakwazi ukukhiqiza kusuka kumaminithi....
I-electrical 96 alumina substrate ye-ceramic I-Alumina ceramic iyinhlobo yokwakhiwa kwe-ceramics, ngokumelene nokuqhaqhazela, ukumelana kwamandla okushisa, amandla aphakeme, ukuqhuba kahle kwe-thermal, ukulahleka kwegazi, izici zokusebenza kagesi ezizinzile. Isetshenziswa kuma-substrates e-ceramic e-electronic,...
I-DBC alumina substrate ye-ceramic I-substrate ye-DBC iyinhlangano eyisisekelo yezingxenye ze-thermoelectric nama-modules kagesi nama-electronic, le substrate ye-ceramic ine- h igh conductivity esebenzayo, i-dontivity encane ye-dielectric, ukulahleka okuncane kwe-dielectric, Ukufakela okuhle, ikakhulukazi,...
I-aluminium nitride i-alN ceramic substrate I-AlN ceramic substrate ene-conductivity ephezulu yokushisa engaphezu kwama-170W / m. K, ukukhululeka okuphezulu, ukulahlekelwa phansi kwe-dielectric, ukuthungathwa okuhle kanye nezinye izinto ezihle kakhulu. I-substrate ye-AlN iyona engcono kunazo zonke zezinhlobo eziningi...
I-Laser yokusika i-ceramic alumina substrate Ukuze uthole ukuklanywa nokuklanywa okulinkimbinkimbi embonini kufakwe, ukusika kwe-laser kuyinkimbinkimbi ephakeme kakhulu yokucubungula okusezingeni eliphezulu le-ceramic alumina substrate eyindlela ephakeme kakhulu yokukhiqiza kunokwenziwa kwe-CNC. Siphi ikhono esinalo?...
0.5mm Tape Casting 96% I-Aluminium Oxyde Ceramic Substrates Sigxila ekwakheni izinto eziningana ze-aluminium oxide substrates, kufaka phakathi 1. Izinto ezihlukene zebanga kusukela ku 95% kuya ku 99.7% alumina, 2. Ubukhulu obuhlukile kusuka ku-0.5mm kuya ku-300mm, 3. Ukuklanywa okuhlukile nge-shaping ngqo, i-CNC...
I Cordierite Catalytic Substrate
I-Cordierite Catalytic Substrate
I-Ceramic Catalytic Converter Substrate
I-Silicon Nitride Ceramic Substrate